‘उत्पादन र रोजगारीमा जुटौं’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
अबको मूल बाटो भनेको विकास र समृद्धिको हो । त्यसका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर ठोस काम गर्ने मोडल अपनाउनुपर्छ ।
काठमाडौँ — संविधानअनुसार ३ तहको शासकीय संरचना छ । त्यी सबैको चुनाव सम्पन्न भएका छन् । सबै तहको चुनाव सम्पन्न हुनुले लोकतान्त्रि प्रक्रियाले स्थायित्व प्राप्त भएको एउटा उज्यालो चित्र देखाएको छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले स्थायित्व पाएपछि अबको हाम्रो मूल काम आर्थिक समृद्धिका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ ।
राजनीतिक स्थायित्वपछि विकास र समृद्धि हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । अब त्यो लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । विकास र समृद्धिका लागि हामीले उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ । उत्पादनमा आधारभूत रूपमा प्रभाव पार्ने भनेको प्रविधि र पुंँजीले हो । जस्तो– कृषिमा के गर्ने हो ? कस्तो प्रविधि प्रयोग गर्ने, कस्ता औजारको आवश्यकता पर्छ र के गर्दा बढी प्रतिफल आउँछन् ? यसका लागि ठोस आधार तयार गर्नुपर्छ ।
आम रूपमा समृद्धिको कुरा गरेर मात्र हँुदैन । कहाँबाट कसरी आरम्भ गर्ने त्यसमा ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ । हाम्रो व्यापार घाटा बढेको छ । बेरोजगारी बढेको छ । यसको अर्थ के हो भने यी कुराको अन्त्य स्वदेशमै उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमात्र हुन्छ । राजनीतिक स्थिरता हुने स्थिति त बनेको छ, तर अझै पनि केही व्यवस्थापनका समस्या छन् । ती समस्यका कारण केही संशय पनि छ । सबै समाधान भएपछि मात्र आर्थिक वृद्धिको बाटोबाट जान सकिन्छ भन्ने खालको द्विविधा राखेको पनि देखिन्छ । तर राजनीति पुरै रूपमा ‘क्लियर’ भएपछि मात्र आर्थिक वृद्धिको आरम्भ गर्छु भन्ने हुँदैन ।
विशेषगरी उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा हामीले तत्कालै विशेष प्रयास अघि बढाउनुपर्छ । अनि मात्र हाम्रो राजनीतिमा अलिअलि रहेका आशंकाको बादल फाटेर जान्छ । आर्थिक विकासका लागि हाम्रोजस्तो देशमा भारत
र चीनको पनि चासो जोडिन्छ । यदि उनीहरूका जायज चासो, सरोकार र शंका छन् भने निवारण गरेर जानुपर्छ । राष्ट्रिय अहित नहुने गरी उनीहरूका चासो र शंकालाई निवारण गर्दा त्यसले हामीलाई सहयोग नै गर्छ । हामी आर्थिक रूपमा सबल हुने बाटोमा लाग्यौं भने राजनीतिप्रतिका आशंकाहरू निवारण हुन्छ र प्रगतितर्फको बाटो तय हुन्छ । हामीले हाम्रा काम ‘बिजनेस लाइक डिल’ गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले आर्थिक विकासका लागि सबैसंँगको सम्बन्धलाई व्यावसायिक ढंगले अघि बढाउनुपर्छ ।
दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा धेरै विषय ल्याएका छन् । हाम्रो चुनावी घोषणापत्रमा पनि विभिन्न विकास र समृद्धिका योजना छन् । घोषणापत्र अनुसार काम तत्काल हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । यस सन्दर्भमा हेर्दा घोषणापत्र ज्यादा चुनाव केन्द्रित खालकै छ । घोषणापत्रमा उल्लेखित योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न कति स्रोत चाहिन्छ, कस्ता औजार आवश्यक पर्छ भन्ने त्यहाँ छैन । घोषणापत्र भनेको घर बनाउनुभन्दा अघि गरेको अन्दाजजस्तै हो । बनाउँदै जाँदा बढी लाग्न पनि सक्छ । घोषणापत्रमा बढाइ–चढाइ विषयहरू पनि आएका हुन सक्छन् । तर अब हाम्रो प्राथमिकता निश्चित क्षेत्र केन्द्रित हुनुपर्छ । सबै काम एकैचोटी गर्छौं भन्नु भनेको कुनै पनि काम समयमा नसक्नु भन्ने हो । त्यसैले निश्चित अवधि किटान गरेर प्राथमिकताका निश्चित क्षेत्रमा यो–यो काम यति समयमा गर्छौं भनेर
निर्धारण गर्नुपर्छ । यो मोडलमा विकासको गति अघि बढाउनुपर्छ ।
जस्तो– सबै ठाउँमा सबै खालको कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने ढाँचा बन्द गर्नुपर्छ । निश्चित पकेट क्षेत्र तोकेर हरेक वस्तुको उत्पादन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र र पुँजी परिचालन हुने क्षेत्र तोकेर प्राथमिकता दिने हुनुपर्छ । पूर्वाधारको सन्दर्भमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने पूर्वाधारलाई पहिले बनाउनुपर्छ । जस्तो– नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार भारत र चीनसँंग छ ।
त्यसैले चीन जोड्ने रसुवागढी र भारत जोड्ने वीरगन्ज–रक्सौलसम्मको बाटोलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।हामीले हाम्रो प्राथमिकता तोक्दा विकास र समृद्धि भनेर घोक्ने होइन । दिमागले सोचेर निर्धारण गर्ने हो । हिमाल चढ्ने व्यक्ति पनि पहिले सानो हिमाल चढेपछि मात्र सगरमाथा आरोहण गर्न सक्छ । सुरुमै सगरमाथा चढ्छु भन्यो भने असफल हुनसक्छ । त्यसैले हामीले विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्दा पनि चढ्नेचाहिँ सगरमाथा नै हो । तर त्यसका लागि शक्ति आर्जन गर्न पहिले कुन–कुन हिमाल चढ्नुपर्छ भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ ।
अहिले ३ तहका सरकार बनेका छन् । ती सरकारले सम्पूर्ण रूपमा काम गर्न केही समय अझै लाग्न सक्छ । कतिपय कानुन र स्रोतसाधन अभाव देखिएका छन् । हामीले संविधानमा सबैलाई अधिकार दिने भनेका छौं । तर आफ्ना अधिकार के हुने भन्ने चेतानाको समेत कमी छ । जस्तो– संविधानमा स्थानीय तह, प्रदेशलाई कर लगाउने अधिकार दिएको छ । तर अझै पनि केन्द्रले पैसा दिएपछि मात्र गाउँ बनाउने हो भन्ने ढंगले कुरा भइरहेको छ । तल्लो तहका सरकारहरूमा अहिले अनुभव छैन । उनीहरूले अनुभवले खारिँदै जाँदा काम सहज रूपमा हुने अवस्था आउँछ । तर अहिले तत्काल केन्द्र र प्रदेशले तल्लो तहका लागि आवश्यक संरचना बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा के–के संरचना रहन्छन् भन्ने छिनोफानोसमेत नभएकोले केही अप्ठेरोजस्तो देखिएको हो । तर विस्तारै यो मिल्दै जान्छ । संरचनाहरू बन्दै जान्छन्, तर अबको मूल बाटो भनेको विकास र समृद्धिको हो । त्यसका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर ठोस काम गर्ने मोडल अपनाउनुपर्छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेसंँग गरिएको कुराकानीमा आधारित
प्रकाशित : वैशाख १, २०७५ ०७:४८